Xarunta Abaalmarinta Bandhiga - Florida International Trade Expo
Ku soo dhowow Xarunta Abaal-marinta PlayFlorida Expo. Xarunta Abaal-marinta waxaa loo sameeyay in lagu dhiirrigeliyo is-dhexgalka ka-qaybgalayaasha iyo soo-bandhigayaasha isla markaana abaalmarinno la siiyo kuwa muujiyey heerka ugu sarreeya ee ka-qaybgalka Expo. Adiga oo ah soo bandhige diiwaangashan ama soo booqde diiwaangashan, horey ayaad u gashay tartanka, laakiin kaqeybgalkaagu waa ikhtiyaari. Si aad u ciyaarto, si fudud u buuxi inta badan caqabadaha ku jira liiska hoose. Caqabad kasta oo la dhammaystiray waxay kaa heli doontaa dhibco. Ciyaartoyda leh dhibcaha ugu badan dhammaadka Expo ayaa guuleysta. Caqabada ayaa socon doonta laga bilaabo 16-ka ilaa 18-ka Maarso. Ku guuleystayaasha waxaa lagu dhawaaqi doonaa Maarso 18, 2021 dhamaadka Expo.
Saddexda (3) Abaalmarinta Ciyaaryahanka:
Abaalmarinta 1aad - $ 750.00 Kaarka Hadiyadda ee Amazon oo lagu bixiyo Doolarka Mareykanka.
Abaalmarinta 2aad - $ 500.00 Kaararka Hadiyada ee Amazon oo lagu bixiyo Doolarka Mareykanka.
Abaalmarinta 3aad - $ 250.00 Kaararka Hadiyada ee Amazon oo lagu bixiyo Doolarka Mareykanka.
Ku guuleysta dhibcaha dhammaystirka isdhexgalka soo socda:
Hesho 50 dhibic daqiiqad kasta oo ah fiidiyaha muuqaalkiisa la daawaday.
Ku guuleysta 40 dhibic adoo gujinaya badhan kasta, fiidiyowyo, iyo macluumaad kale oo laxiriira soo bandhige.
Baadh bakhaarrada wax lagu soo bandhigo ee goobta oo dhan guji boodhka kalluunka si aad uga tagto macluumaadkaaga xiriirka. Ku hel 25 dhibic qol kasta oo la booqdo.
Ku kasbo 150 dhibco webinar kasta oo toos ah oo aad ku aragtay gebi ahaanba.
Ku guuleysta 25 dhibic markaad gujineyso mid kasta oo ka mid ah kafaala qaadayaasha astaamaha, fiidiyowyada, iyo liistada.
Waxaan sugeynaa ka qeybgalkaaga!